Nigeria: 100 Qof Oo Laga Soo Furtay Boko Haram – Goobjoog News
Nigeria: 100 Qof Oo Laga Soo Furtay Boko Haram
Ciidamada Nigeria ayaa sheegay in ay ka soo furteen Boko Haram 100 qof oo la heystiyaal ah,kuwaasi oo ay horay u afduubteen kooxdan.
Dadka ay ciidamada ka soo Furteen Boko Haram ayaa u badan haween iyo caruur oo ay ka afduubteen gobolka Borno ee waqooyi bari ee dalka.
Wakaaladda wararka Associated Press oo uu la hadlay Tashoomo oo ciidamada u qaabilsan Xiriirka guud ayaa caddeeyay in ciidamada ay dadkan ka soo furteen Boko Haram,isaga oo tilmaamay in ay ku hayeen Afar tuulo oo ka tirsan magaalada Baama ee gobolka Borno.
Tashoomo ma uusan daaha ka rogin xilliga ay ciidamada fuliyeen howlgalka lagu soo furtay la heystiyaasha, balse waxaa uu xaqiijiyey in ay ku jiraaan rag badan oo kooxda horay u afduubatay si ay uga barbar dagaalamaan, ayna u suuro gashay inay ka soo furtaan.
Boko Haramta Nigeria ayaa dusha saaratay mas’uuliyadda fulinta kumanaan howlo afduub ah, kumana sii jirto beegsigeeda haweenka iyo gabdhaha.
Fallaago-nimada Boko Haram ayaa ka bilaabatay muddo 9 sano laga joogo gudaha Nigeira iyo tiro dowlado ah oo ku hareereysan.
Boko Haram ayaa gacanta ku dhigtay dhamaadkii 2014, magaalada Baama oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Borno, ka hor inta aysan dowladda soo ceshanin sanadkii 2015kii.
Xaalado Adag Oo Dhanka Nolosha Ah Oo Ka Jira Sh/dhexe
Dhageyso: Gaas Oo Dhaliilay Xubnaha Puntland Ku Matala Aqalka Sare